Umaki: Zoho | Martech Zone
Kungakhathaliseki ukuthi inethiwekhi yakho inkulu kangakanani, kuhlala kubonakala sengathi awusoze waba nokuxhumana okulungile. Ikakhulu lapho usebenza nezinhlangano ezinkulu kakhulu. Imininingwane yolwazi yokuxhumana ivame ukuphuma esikhathini - ikakhulukazi ngoba amabhizinisi anenzuzo enkulu yabasebenzi. Amandla okubheka imininingwane yokuxhumana ngesikhathi sangempela kusuka kumthombo oqinile kubalulekile emizamweni yakho yokuphenya ephumayo. I-Aeroleads iyisevisi ene-Chrome Plugin ehambisana nayo eyenza ukuthi iqembu lakho lokuthengisa likwazi
Noma ngabe uhamba ngemoto uholela kusayithi lakho, abathengi abahehayo, noma unikezela ukwesekwa kwamakhasimende… kulindelekile kulezi zinsuku ukuthi wonke amawebhusayithi anekhono lokuxoxa elihlanganisiwe. Yize lokho kuzwakala kulula, kuningi okuyinkimbinkimbi ngengxoxo… kusuka ekwenziweni kwengxoxo, ukubekezelela ogaxekile, ukuphendula ngokuzenzakalela, ukuhambisa umzila… kungaba yikhanda impela. Iningi lamapulatifomu wengxoxo alula kakhulu… ukudluliswa nje phakathi kwethimba lakho lokusekela kanye nesivakashi kusayithi lakho. Lokho kushiya okukhulu
I-Leadfeeder: Khomba bese ubala izinkampani ze-B2B ezivakashela isayithi lakho
NgoLwesibili, Septhemba 22, 2020 NgoLwesine, ngo-Okthoba 1, 2020 Douglas Karr
I-Leadfeeder wuhlelo lokusebenza lwewebhu olwandisa ubuhlakani bakho bokuthengisa ngokuhlanganisa idatha yakho yokuthengisa neyokumaketha, enika amandla inhlangano yakho ukuthola amabhizinisi amasha nokuqapha amakhasimende akhona eza kuwebhusayithi yakho. Ukuhlonza kuhambisana ne-database ecebile yabasebenzi lapho ungathola khona ama-imeyili namaphrofayili omphakathi wabenza izinqumo ngaphakathi kwenhlangano. Leli ithuluzi elihle lamabhizinisi we-B2B ngoba lingakhomba izivakashi ezingaziwa ezine-
NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2015 Douglas Karr
Uma uyiqembu lokuthengisa elingenayo, ithimba lokwesekwa kwamakhasimende, noma i-ejensi oyibonayo ngokushesha ukuthi amathuba nezicelo zamakhasimende zingalahleka kanjani kumagagasi ama-imeyili umuntu ngamunye awathola online. Kufanele kube nezindlela ezingcono zokuqoqa, ukwabela, nokulandelela zonke izicelo ezivulekile enkampanini yakho. Yilapho kusebenza khona ideski ledeski losizo futhi lisiza ekuqinisekiseni ukuthi iqembu lakho ligxile ekuphenduleni nasekusebenzeni kwamakhasimende.
Ngonyaka odlule, sihlolisise izixazululo ezahlukahlukene zamakhasimende ethu e-B2B ukukhomba ngokunembile izivakashi zewebhusayithi. Abantu bavakashela isayithi lakho nsuku zonke - amakhasimende, abaholayo, izimbangi, kanye nemidiya - kepha ama-analytics ajwayelekile awanikeli ukuqonda kulawo mabhizinisi. Ngaso sonke isikhathi lapho othile evakashela iwebhusayithi yakho, indawo yabo ingabonakala ngekheli labo le-IP. Lelo kheli le-IP lingaqoqwa ngezixazululo zenkampani yangaphandle, ukuhlonza kufakwe, nemininingwane ethunyelwe